Twitter sy ny aretin'andoha vokatry ny mpamorona sasany | Androidsis
Hahafantatra momba ny olana nanjo ny rindranasan'ny antoko fahatelo amin'ny Twitter ianao, indrindra ny Falcon Pro sy ny fetran'ny Token, farany nanapa-kevitra ny namorona azy io hanala azy io amin'ny Google Play, satria tsy hitany ny fomba azon'ny mpampiasa maro kokoa ahazoana azy io sy hankafizany ny iray amin'ireo mpanjifa Twitter tsara indrindra nananan'ny Android.
Ny Twitter talohan'ny fanafihan'ny Falcon Pro dia tsy nikorontan-tsaina momba izany, nahafantatra ny heriny sy manana ny zon'ny fampiharana satria izy no mpamorona iray amin'ireo tambajotra sosialy malaza indrindra. Nikomy ny mpamorona Falcon Pro tamin'ny famerenany ireo Token na fanalahidy fanindroany, hahafahan'ny mpampiasa maro kokoa mividy azy. Tao anatin'ny roa andro monja dia tonga tampoka ny fetra farany ahafahany mividy ilay rindranasa. Ity fanapahan-kevitra noraisin'ny Twitter hampiato ny tongony ity dia nahazo ny mpamorona ilay fampiharana malaza sy malaza hahatonga azy hanjavona mandrakizay ao amin'ny Google Play.
famoronana ny mpanjifa Twitter dia nify mamy ho an'ny mpamorona rehetraRaha mamorona rindranasa eken'ny besinimaro ianao dia mitsambikina kely amin'ny Android, saingy tsy maintsy tadidinao fa amin'ny fotoana iray dia hahatratra ny fetra fampidirana tenimiafina napetraka ianao ary tsy misy olon-kafa afaka mividy azy, satria ny politika izay ananan'i Twitter dia toy ny misy azy izao, manana Token ambony indrindra ianao ary tsy misy intsony.
Etsy ankilany, Twitter dia mamolavola miadana miadana ny fampiharana ofisialinao manokana, tonga tara ny fanovana, ary toa tsy liana tamin'io foana aho.
Manodidina ity faharetan'ny famoronana fampiharana mendrika ity, nipoitra ny mpamorona samihafa izay nahalala ny fomba hanararaotana ireo lesoka ny mpanjifa ofisialy, ary efa nidina tany amin'ny faran'ny mpampiasa izy ireo, safidy tena feno. Falcon Pro, Volomparasy, HootSuite, Twicca, na i Carbon dia misy amin'izy ireo, samy manana ny hatsarany, raha i Falcon, Twicca, ary farany ny Tweet Lanes, no tena nanararaotra ny tena mety hisian'ny tambajotra sosialy toa ny Twitter.
Hatreto aloha, fa miadana tokoa ny Twitter miaraka amin'ny fampiharana ofisialy ary tsara ho an'ny hafa manararaotra ireo toerana banga. Fa omaly dia nahagaga ny rehetra ny Twitter miaraka amin'ny fisehoan'ny kinova beta vaovao, izay entiny izay rehetra nandrasana hatramin'ny nahatongavany tamin'ny Android tamin'ny fomba ofisialy.
Ilay kinova beta vaovao 5.0 an'ny Twitter
Fitaovana fahitana tena tsara, ny lokony nohajaina tsara tamin'ny palety volondavenona, manga sy fotsy, fitetezana tsara eo amin'ireo safidiny rehetra, ny tontolon'ny fizaran-tany Holo izay be mpampiasa ary ny sasany kiheba izay mamela ny fihetsika amin'ny sisiny handalo ny tsirairay amin'ireo lahasa Ireo hafatra manandanja indrindra ao amin'ny Twitter, toy ny fandaharam-potoana, retweet, firesahana, hafatra mivantana na fironana.
Androany, maro amin'ny tambajotra no gaga amin'ny fanavaozana ny Twitter miaraka amin'ny kinova beta vaovao, fa ny fahitana azy dia mety ho toa zava-baovao, farafaharatsiny amin'ny fomba fitetezanao eo anelanelan'ny kiheba miaraka amin'ireo fihetsika amin'ny lafiny, misy ny rindranasa izay efa namorona io volana io ihany, Tweet Lanes.
Avy amin'ny Bitsika twitter ofisialin'i Lanes, tadidin'izy ireo fa toa izany Twitter dia "nandika" andraikitra lehibe sasany ny fampiharana azy, ary toy izany koa raha mampitahanao ny kinova beta 5.0 an'ny Twitter amin'ny Teeet Lanes. Ny mpamorona azy, Chris Lacy, dia tsy namela ny fahagagany rehefa hitany fa nitovy tamin'ny azy ilay kinova beta vaovao an'ny Twitter.
Tweet Lanes dia mpanjifa Twitter lehibe
Inona no sisa eto? Tsy misy zavatra vitan'ny mpamorona ny Tweet Lanes, nampiasa Twitter izy hamoronana fampiharana mahafinaritra, izay avy eo ny tenany ihany no nandika izay noheveriny fa tsara indrindra ho an'ny tompon'andraikitra manokana. Lanes koa dia nanome an'i Chris ny lazany, na dia tsy maintsy tsaroana aza fa ity mpamorona ity dia fantatra bebe kokoa amin'ny mpandefa lehibe noforoniny izay tsy iza fa ny Action Launcher Pro ho an'ny Android
Eto i Twitter dia manana ny zava-misy, miaraka amin'ny fetran'ny Token, mba hitondra amin'ny fampiharana ofisialy ny hatsaram-panahin'ny mpanjifa Twitter hafa toy ny Tweet Lanes ary ny fomba ampiasany ireo developer izay mampiasa ny tambajotran-tseraserany mba hamoronana fampiharana mahafinaritra. Fifandraisana fankahalana sy fitiavana ho an'ny Twitter sy ho an'ny mpamorona mpanjifa antoko fahatelo.
Angamba ny tokony hataon'ny Twitter hihavanana amin'izy ireo indray andro any dia ny manakarama azy ireo, satria ny asany dia nampiseho tsara ny lanja ankafizin'izy ireo amin'ny maha mpamorona, ary izany koa dia ampahany amin'ny fahombiazan'ny Android lehibe anio
Fanazavana fanampiny - Kinova beta beta vaovao an'ny Twitter miaraka amin'ny fiovana lehibe eo amin'ny interface interface
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fifandraisan'ny fankahalana ny fitiavana Twitter amin'ny mpamorona fampiharana antoko fahatelo
BAURK dia hoy izy:
Famakafakana voalohany sy fikarohana lalina ny kinova Beta an'ny Twitter
Valiny amin'i BAURK